काठमाडौँमा सातौँ जुनियर कराँते च्याम्पियनसिप सुरु
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७८-०८-०३ | २८७ ५
खेल अवधिको प्रतिस्पर्धा र त्यसपछिको सौहार्दता खेल जगतबाट अरुले सिक्नुपर्ने पाठ हो — प्रमुख शाक्य
काठमाडौँ । राष्ट्रिय टेवुलटेनिस हल लैनचौरमा आजदेखि ७ औँ जुनियर कराँते च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ । नेपाल सितेरियो कराँते संघको सहयोग र ठमेल डोजोको आयोजनामा सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट ४ सय र भारतबाट ५५ जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
खेल सामाग्री दिएर च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गर्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले, खेलका अवधिमा खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसपछि सौहार्द सम्बन्ध बनाउने आचरण अन्य क्षेत्रले सिक्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्य क्षेत्रमा एक पटक सुरु भएको प्रतिस्पर्धा कहिल्यै सकिँदैन । तर, खेलमा निश्चित समयपछि प्रतिस्पर्धा सकिएर पूर्ववत सम्बन्ध कायम हुन्छ । राजनीति र प्रशासन क्षेत्रमा यसको अनुकरण हुनुपर्छ । प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ महानगरले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा तथा पर्यटन, सामाजिक तथा खेलकुदका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरेको छ । ‘व्यक्ति जुन क्षेत्रमा होस् । यदि कसैले महानगरको आवश्यकता महसुस गर्दा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसलाई लक्ष्य बनाएर नीति, योजना बनाएका छौँ । यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’ प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो ।
आयोजक कमिटीका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठकाअनुसार खेलमा करीब ४ सय नेपाली र भारतबाट करीव ५५ खेलाडी सहभागी छन् । उमेर समूह र तौल समूह, केटा र केटी गरी ४ समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
उमेर समूहमा ८ बर्षदेखि तलका बालबालिकालाई पहिलो समूह बनाइएको छ । त्यसपछि हरेक २ बर्षको अन्तर बनाएर १८ बर्षसम्मका खेलाडीलाई सहभागी गराइएको छ । यसैगरी तौल समूहतर्फ २० के. जी. भन्दा कम तौल भएकालाई पहिलो समूह बनाइएको छ । त्यसपछि हरेक ५ के. जी. को अन्तरमा ८० के. जी. सम्मलाई तौल समूहमा बर्गीकरण गरिएको छ ।
२ दिने प्रतिस्पर्धा भोलि सकिनेछ । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको छ ।
खेल उद्घाटन अवसरमा कराँतेका राष्ट्रिय खेलाडीहरु मन्डेकाजी श्रेष्ठ र मुकुन्द महर्जन तथा शारीरिक सुगठनतर्फ मिस्टर नेपाल सानु गुरुङ्लाई सम्मान गरिएको थियो ।
#7th Junior Karate Championship
वडा १८ पुष्पलाल पार्कमा खुल्ला शारीरिक व्यायाम स्थल स्थापना Previous Post
काठमाडौँ महानगरले प्रविधियुक्त र वातावरणमैत्री सार्वजनिक शौचालय बनाउने नीति लिएको छ — प्रवक्ता डंगोल Next Post